မေ 2019 – FERD
Monthly Archives: မေ 2019
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပညာသင်ဆုပေးရေးစီမံချက်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယန်း ၆၁၂ သန်း အကူအညီပေးမည့် စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး
သတင်းBy thin zar မေ 28, 2019
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ အကူအညီပေးရေး ဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး လဲလှယ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးဝင်းမြင့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် ဂျပန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပညာသင်ဆုပေးရေး စီမံချက် အတွက် ဂျပန်ယန်း(၆၁၂)သန်း အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာကို…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ၊ Presidential Committee on New Southern Policy ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သတင်းBy phyu su htwe မေ 16, 2019
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေ ၁၅ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီး သည် ၁၅-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည် (၂:၃၀) နာရီတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ Presidential Committee on New Southern Policy (NSP) ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ Mr. CHEON Young-Ghil ဉီးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (ရုံးအမှတ်-၁) တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ New Southern Policy ၊ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ (ODA) ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ…
သတင်းBy thin zar မေ 2, 2019
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ IT ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။ အခမ်းအနားသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Alessandra Schiavo၊ အီတလီနိုင်ငံ AICS အဖွဲ့မှ Ms. Anna Dal Maso၊ KMD နှင့် NetSmart ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများ၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် အီတလီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Alessandra Schiavo…